Delivery Warehouse Assistant at IKON Trading Co.,Ltd
Mingaladon, Yangon 13 February 2020
Job Reference: MJ1581574152663
Savvy International Co., Ltd executes all the services of multi-temperature warehousing, inventory management, logistics and distribution management. We are located less than5minutes away from Yangon International Airport. We are energetic, fun loving and resourceful team who are always committing and aiming for excellence in what we do.
We are looking forahighly motivated and curious Delivery Warehouse Assistant who will be able to operate in highly ambiguous environment, communicating and interacting with your direct Operations Manager onadaily basis.
• Make deliveries to various clients daily
• Issue / serve invoices and delivery orders
• Invoices & Delivery လမ်းကြောင်းများထုတ်ရန်၊ Customer များထံသို့ပို့ပေးရန်။
• Liaise with logistics team for the day’s delivery agenda
• Delivery လမ်းကြောင်းများကို Logistics နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
•ပစ္စည်းသွားရောက်ပို့ဆောင်ရသည့် Customer များကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်။
• Checking quantities and quality of goods
• ပစ္စည်းအတင်အချပြုလုပ်ရာတွင် အရေအတွက်၊ အရည်အသွေးများစစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ရန်။
• Recording documents and information and sending to the office
• ပစ္စည်းပေးပို့သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့် အခြားလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ရုံးသို့ပေးပို့ခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်။
• As required performing Warehouse inbound and outbound processes.
• ဂိုထောင်ပစ္စည်းအတင်အချ၊ Operations ပိုင်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်။
• As per Management Requirements.
• Must be able to travel in Yangon skillfully daily.
• ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်းကြောင်းများကိုကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။
• Must be able to work independently and travel within Myanmar from time to time.
• လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ပီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလို့အားလျော်စွာခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
• Must be able to commit to overtime after working hours when situation requires.
• လိုအပ်သည့်အခါ အလုပ်ချိန်ပြီးနောက် အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•0or 1 years experiences in related field.
• ၁နစ် (သို့) အတွေ့အကြုံမရှိလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
• လျင်မြန်စွာ သင်ယူနိုင်ပီး သွက်လက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ရပါမည်။
• Candidate must be flexible to work6daysaweek. (Monday to Saturday)
• လျှောက်ထားသူသည် တစ်ပါတ် ၆ရက်အလုပ်လုပ်နိုင်ရပါမည်။
• Uniforms, office meals provided.
• Saving salaries and SSB offered by company.
• Ferries to nearest place provided.
• Other benefits as per company’s policy.
• Training for continuous improvement and growth.